संसारकै सबैभन्दा अनौठो गाउँ, जहाँ केवल बलात्कारी पुरुषहरु मात्र बस्दछन् ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/संसारकै सबैभन्दा अनौठो गाउँ, जहाँ केवल बलात्कारी पुरुषहरु मात्र बस्दछन् !
सन् २००९ मा स्थानीय पादरी डिक विथ्रोले सो गाउँलाई यौन अपराधीहरुको गाउँका रुपमा परिवर्तन गरिदिए । उक्त गाउँमा बलात्कार गर्ने अपराधीहरुलाई राख्न थालियो । बाल यौन दूराचारदेखि लिएर आफ्नै प्रेमिका र अन्य महिलाको समेत बलात्कार गर्ने अपराधीहरु उक्त गाउँमा बस्दछन् । वास्वतमा यो गाउँ एक खालको जेल नै हो । यहाँ बलात्कारको अपराधमा जेल सजायँ पाएका अभियुक्तहरुले आफ्नो सजायँ काट्दछन् ।